Pika! Charging show အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
3.2 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（47.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Pika! Charging show - charging animation
အေးမြ။ ချောမွေ့ !! ပုံဖော်ခြင်းကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာနူးညံ့သိမ်မွေ့စေရန်နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောရုပ်ပုံများကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြုလုပ်ရန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ "PPP" အမျိုးအစားကိုငြင်းပယ်ပါ, အားသွင်းခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောခံစားချက်များကိုယူဆောင်လာပါ ~
Pika! အားသွင်းခြင်းပြပွဲ - အားသွင်းကာတွန်းကာတွန်းကားအလိုအလျောက်ပြသသည်။ Charging Cable ကိုချိတ်ဆက်ပြီးနောက်အက်ပလီကေးရှင်းကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကာတွန်းအားအားသွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ချက်ချင်းပြသသည်။ လာစမ်းပါ ~
Pika! အားသွင်းခြင်းပြပွဲ - အားသွင်းကာတွန်းဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
[charging power] ပစ္စည်းကိရိယာများအားသွင်းနိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးပါ။
[charging status ကိုအားသွင်းခြင်း အားသွင်းခြင်း၏အဆုံးတွင်တာဝန်ခံပမာဏအစတွင်တာဝန်ခံပမာဏအစတွင်တာဝန်ခံပမာဏ။
[inflate use use use use unlock uncking animation အသစ်များကိုအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းများဖြင့်အားသွင်းခြင်းကာတွန်းအသစ်များကိုသော့ဖွင့်ပါ။
အားသွင်းအပြင် ကာတွန်း, အားသွင်းသည့်အချက်အားသွင်းသည့် function ကိုနောက်ပိုင်းတွင်မွမ်းမံပါလိမ့်မည်။ မင်းအတွက်အမြဲတမ်းရှိတယ်။
မှတ်ဥာဏ်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာကာတွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ရင် software ထဲမှာ cache ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်တယ်။ app ကို uninstall လုပ်မယ့်အစားနောက်ခံမှာသန့်ရှင်းရေးမလုပ်ဘဲ, ဆော့ဗ်ဝဲထဲမှာတိုက်ရိုက်ကွပ်မျက်နိုင်ပါတယ်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? Pik ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ အားသွင်းခြင်းပြပွဲ - ကာတွန်းအားသွင်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုသုံးပါ။